The University of Adelaide - Ọmụmụ na Australia, be International
tọrọ ntọala : 1874
Echefukwala discuss The University of Adelaide
The University of Adelaide bụ a ụwa-klas tertiary muta na nnyocha na alụmdi mbọ iji na-anapụta elu àgwà na iche mmụta, ezi ihe ma na research ahụmahụ.
The University of Adelaide dabeere na:
ịmata ihe ọmụma
akwadebe ihe ndị gụrụ isi echi ndị na-nọọrọ onwe ha, okike-eche echiche bụ na mba n'ọnọdụ.
The University of Adelaide adọrọ ike ya okobot ụkpụrụ dị ka ọ na-emezu ihe ọdịnihu ya ga nnyocha na izi achụso.
The University bụ òtù mba na distinctively agbakụ na ezigbo nke nnyocha mahadum, ebe obi ụtọ, vitality na ahuhu nke search maka ọhụrụ ihe ọmụma bụ otu mgbe ndị niile ụmụ akwụkwọ na-ekere òkè; dị ka onye mmụta na-anabata obodo ebe ike ụmụ akwụkwọ pụrụ inweta nkwado, ihe ọ bụla si zụlite ha ma ọ bụ ọnọdụ; na dị ka a ebe Kaurna ndị, mbụ nlekọta nke ala nke campuses now zuru ike, na-kwetara na ha omenala akwanyere ùgwù.
The University of Adelaide pụrụ iche atụmatụ
A na-amụrụ aru nke onye kwuo uche obosara
A mkpara nke mba dị iche
A mmụọ nke nnwere onwe na ichoputa ọhụrụ ubi
A uche nke mkpa ka ndị obodo
A mgbaru ọsọ iji kwadebe gụrụ akwụkwọ ndi-isi.
The University of Adelaide, na-akwa aka a pụrụ iche na obibia na recaptures na ezigbo nke nnyocha mahadum, na-achọ ihe mba-okowụk mkpara na a emede, -aga n'ihu na-amụrụ mix, nke ga-akwadebe ụmụ akwụkwọ maka zuru ụwa ọnụ amaala na-esiwanye borderless ụwa. Ọ ga-abụ a mahadum ezi ya akụkọ mgbọrọgwụ, ma passionately-agba mbọ ka ya ọrụ na-emepụta na-agụsị akwụkwọ ndị e mere na-egwu na-eduga akụkụ ke Asia Century.
-Amụta na izi-agụnye ihe ndị sara mbara Undergraduate na Postgraduate degrees awa na University.
Ụmụ akwụkwọ na-nyere na a pụrụ iche na-holistic mmụta ahụmahụ na gụsịrị akwụkwọ àgwà na-kwekọọ na ọrụ a ga esi. Anyị degrees dị mkpa nye ndị na-agbanwe agbanwe chọrọ nke ọrụ na mkpa nke ụlọ ọrụ na ndị obodo.
School of Electrical & kọmputa Engineering
itumgbere, Commercialisation & Innovation Centre (ECIC)
Ị chọrọ discuss The University of Adelaide ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: The University of Adelaide ukara Facebook